HALKAAN KA AQRISO WARGEYSKA MAANTA EE MOGTIMES DAILY OO TARIIKHDA 18 0CTOBER 2021
Monday October 18, 2021 - 08:00:32 in Wararka by Mogadishu Times
Ergada Soomaaliya ku matalayay kiiska bad da oo si weyn loo maamuusay
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa Habeen hore munaasabad soo dhaweyn ah u qabtay Ergadii Soomaaliya ee Kiiskii difaaca Baddeenna oo uu hogaamina yey Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumad da Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khad ar).
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa uga mahad celiyey dadaalka ay ku bixiyeen difaacan Qar an, isaga oo dul istaa gay halgankii dheere ee lagu bixiyey sidii loo ga hor istaagi lahaa Ke nya damaca ay ku do onaysay in ay ku qaadato qeyb ka mid ah bad da Soomaaliyeed.
Rooble ayaa bogaadiyey isku duubnida sha cabka Soomaaliyeed iyo sida wadajirka ah ay ugu istaageen dacwadda lagu difaacayey badd eenna, isaga oo tilmaamay in taas ay ka tarju meyso biseylka iyo wadaniyadda ay ku tilma aman yihiin shacabka Soomaaliyeed.
Dhankiisa, Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed iyo xubnaha weheliy ey ayaa uga mahadceliyey Ra’iisul Wasaaraha munaasabaddan maamuuska ah, iyagoo adk eeyey qorsheyaasha lagu sii ilaalinayo mad axbannaanida iyo qarannimada dalkeenna.
Maxkamadda ICJ ayaa Talaadadii guusha kiiskii dacwadda badda u xukmisay Soomaali ya, ayada oo meesha ka saartay doodda Ken ya ee aheyd inuu jiro heshiis ama is-faham la bada dal ay isku raacsan yihiin oo ah inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqa loolka, waxayna ayidday doo dda Soomaaliya oo aheyd inaanu jirin heshiis noocaan oo kale ah.
Maxkamadda ayaa sidoo kale go’aamisay in xariiqda xuduudda labada dal ay noqoto mid toos ah oo ah sida ay Soomaalida codsatay, halkii ay xariiqda ka noqon laheyd mid lool ah oo ah sida ay Kenya dalbatay, waxayna Maxk amadda 75% dhul-badeedkii la isku hayey sii say Soomaaliya.
Muuse Biixi oo markii ugu horreysay ka had lay dadka laga raafay SOMALILAND, sheegayna arrin yaab leh
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Ca bdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay dadka ka soo jeeda Koonfur Soomaaliya ee deegana dooda ka musaafurineyso, kuwaasi oo u badan dadka kasoo jeeda Koonfur Gal beed.
Muuse Biixi ayaa sheegay arrin yaab leh oo ah sababta dad kaas loo musaafurinayo, taasi oo ah markii xu kuumadiisa ay awoodi kari weyd ay sugida amn igooda, taasi oo ka duwan sab abtii ay markii hore sheegeen mas’uuliyiinta ka le ee Somal iland oo aheyd in dadkaas ay halis ku yihiin amniga Somaliland. "Anaga waa qa adi kari weynay miisaankooda nabad-galyo ahaan iyo dhaqaale ahaan, wa xaa saarnay in ka badan 30 gawaadhi ah, wax aana gaadhi walba oo la saaray waxaa ka bix inay 1,300 oo dollar waxaana saarnay xataa daawo,” ayuu yiri Madaxweyne Muuse Biixi. Sidoo kale wa xa uu sheegay in gawaadhida ay ku musaafur iyeen dadkii kasoo jeeday Koonfur Galbeed ee ku sugnaa Laascaanood la soc deen ciidamo suga amnigooda illaa inta ay ka gaarayeen xuduuda maamulka Puntland.
"Gobolada kale ee aad u hadlaya ee leh waa soo dhaweynayna (dadkaas) ee ka tirsan Soomaaliya, waxaa leenahay 30 sanno ayey joogeen oo majiro qof reer Baydhaba ah oo la gu dilay Somaliland oo hanti laga dhacay ma jiro.”
"Puntland oo aad durbaan u tuntay, iyadu maalin qudha ayey 17 cunug oo labaatan ga arin intay soo qabteen yiraahdeen dil baa ku xukunay oo iyaga wax dilayey.”
Madaxweynaha Somaliland ayaa ku eed eyay madaxda dowladda Soomaaliya inay day aceen Shacabkooda oo maalin kasta lagu xas uuqo magaalada Muqdisho.
"Xamar ka hadli maayo oo af aan kaga ha dlo iima banaano, meel dhiiga bini-aadamka la ga baayac-mushtarayo, kuwa ugu dulmiga bad an ee lagu laayo waa dadka kasoo jeeda Koo nfur Galbeed.”
Ugu dambeyntiina waxa uu sheegay in la buun-buuninayo musaafurinta dadkaas oo uu ku dooday inay si wanaagsan oo bini-aadant imo uga saareen deegaanadooda, islamarkaa na ay kharash badan geliyeen daad-gureynto oda.
R/W Rooble oo war cusub ka soo saaray do orashada golaha shacabka Soomaaliya
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaal iyam Md.Maxamed Xuseen Rooble oo Habeen hore khudbad ka jeediyey munaasabad si weyn loogu maamusayey ergada Soomaaliya ee kiiska badda ayaa soo hadal qaaday doorasho oyinka.
Rooble ayaa shaaca ka qaad ay in si deg-deg ah loo guda-gal ayo doorashada xildhibaa nada aqalka hoose, isla-markaana la bilaabayo todobaadka soo soc da, sida uu hadalka u dhigay.
Ra’Iisul wasaaraha ayaa xusay in lagu hormari doono doorashada 46-da kursi ee gobollada ee wa qooyi ku metalaya baarla maanka soo socda, ta as oo ka dhaceysa gud aha Muqdisho.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inuu arr intaasi kala hadlay guddoomiyaha aqalka sare iyo ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka, ayna ku ballaan in la dadajiyo doorashadaasi.
Waxa kale oo uu carabka ku dhuftay ra’iisul wasaaruhu in xukuumaddiisa ay dadaal badan ku bixineyso dhammeystirka doorashada, si lo oga faa’iideysto waqti kooban ee haray.
"Habeen kasta waxaan ku duceystaa in doora shada ay soo geba-gabowdo, iyada oo aysan cidna xag-xageyn, cidna waxba u dhimim, si doo kale aysan jirin cid dhibaato loo geysto,” ayuu yiri ra’iisul wasaare Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlayey dorashoyinka.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo ma daxda maamul goboleedyada qaar ay weli ka caga jiidayaan doorashada golaha shacabka, waxaana xusid mudan in xittaa Jubbaland iyo Galmudug aysan weli dhammeystirin doorasha da xubnaha golaha aqalka sare Soomaaliya.
Madaxweynaha K/Galbeed oo la kulmay waf di gaaray M/Baydhabo
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdic asiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa Xaru nta Madaxtooyada ku-meel gaarka ee Magaa lada Baydhabo ayaa waxaa uu ku qaabilay Wakiilka Hay’adda FCA ee Soomaaliya Ikali karvinen.
Ikali karvinen Wakiilka cusub ee Hay’aada FCA ee Soomaaliya iyo Xubnaha ku wehlin ayey socdaalkiisa ayaa Madaxweynaha Warbi xin ka siiyey socdaalkooda iyo Waxyaabihii u qabsoomay sanadihii lasoo dhaafay,
Wafdiga ka socday Hay’adda FCA ayaa waxaa ay tilmaameen in Koonfur Galbeed ay kala shaqeynayaan dhisida Gollaha Deegaan ka Degmooyinka Koonfur Galbeed, Hormarinta Waxbarashada,Caafimaada iyo Daadejinta Adeegyada Dowlada.
Laftagareen ayaa u mahadceliyey Wakiilka Hay,adda FCA Ikali karvinen iyo Madaxda ku wehlinaysa Socdaalkiisa, waxaana uu xusay in ay bogaadinayaan shaqada wanaagsan ee Ha y’adda ay ka wado deegaanada Koonfur Gal beed.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Soo maaliya Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ka mahadceliyey dadaalka Hay’adda FCA ka wado deegaanada Koonfur Galbeed.
Booliiska Soomaaliya oo soo bandhigay qaraxyo la diyaarinaayay oo ay gacanta kuso dhigeen
Taliska Booliiska Soomaaliya ayaa faahfa ahin ka bixiyay howlgalo qorsheysan oo ay she egeen iney degmada Afgooye ka fuliyeen ciida nka gaarka ee la dagaalanka argagisixada.
Afhayeenka Booliiska Soomaaliya ayaa she egay in howlgalka lagu soo qabtay miinooyin la diyaarinaayay iyo hub kale oo ah kuwa wax lagu gumaado.
"Cutubka la dagaalanka Argagixisada Booli iska Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen degmada Afgooye waxay gacan ta kuso dhigeen miinooyin farsamo ku socotay, Bambaanooyinka nooca gacanta laga tuuro iyo waliba baaruuda loo istocmaalo miinooyin ka"ayuu yiri Afhayeenka Booliiska.
Booliiska Soomaaliya ayaa intaa ku daray in lagu raad joogo shaqsiyaadkii ku lugta lahaa farsamada qaraxyadaan, islamarkaana ay sii socon doonaan howlgalada noocaan oo kale ah ee looga hortagaayo dhibaatada laguna xaq iijinaayo amaanka.
Dowladda Somalia oo Mareykanka kala had ashay taageerada Ciidamada Xoogga
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xu kuumadda Federaalka Soomaaliya ee xil gaarsiinta ahna Senator la doortay Xasan Xus een Xaaji ayaa Shalay kulan la qaatay Sar aakiil ka socda Safaaradda dowlada Mareykan ka ee Soomaaliya.
Wasiirka Gaashaandhigga iyo Saraakiisha Mareykanka ayaa kulankooda diirada ku saa ray xoojinta taageeradda dowladda Mareykan ka ay siiso Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya iyo Iskaashiga dhan ka Milateriga.
Waxaa kaloo ka wada hadleen labada dhinac sidii loo dar dar-gelin lahaa tababarada Mareykanka siiyo Ciidamada Xoogga dalka, waxaana kulanka ka qeyb galay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Gaashaandhigga Xasan Maxamed Saciid Sa matar Gacaliye.
Dowladda Mareykanka ayaa kamid ah dow ladaha ka taageera dowladda Soomaaliya tab abarada dhinaca Ciidamada, wuxuuna sidoo kale weeraro iyo duqeymo ka fuliya goobaha ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-sha baab.
ROOBLE OO SHAACIYEY TALLAABOOYIN KA LA QAAD AYO KA DIB XUKUNKII KIISKA BADDA
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Md.Maxa med Xuseen Rooble oo hadal ka jeediyay mun aasabad soo dhaweyn ah oo u qabtay Ergadii Soomaaliya ee Kiiskii difaaca baddeenna ayaa sheegay in loo baahan yahay fulinta xukunka maxkamadda ICJ.
Rooble ayaa ugu horeyntii u mahad-celiyay dowladihii is kaga dambeeyay tallada dalka ee doorka muuqda ku lahaa ki iska badda, isagoona farxad weyn ku tilmaamay in aan leenahay xuduud ba ddeed cad.
"Guushii maxkmadda maxaa ku xiga? Wax aa ku xiga fulinteeda oo u baahan dad sax ah oo ka shaqeeya oo hore u sii wado waxa ay walaalaheen soo hooyeen.”
Ra’iisul Wasaaraha ayaa ballan-qaaday in ergadii Soomaaliya ee kiiskaas uu garab ku si in doono si loo helo nidaam cad iyo hab fulin eed oo ku aadan dhulka maxkamadda ay inta badan u xukmisay Soomaaliya.
"Waxaa loo baahan yahay oo ballan-qaad aya ergadii ka qeyb-gashay oo soo hoysay guushaas taariikhiga ah aan garab ku siiyo istiraat ijayad iyo nidaam cad oo lagu fulinayo inta noo hartay oo ah in la fuliyo xukunka maxkamad da,” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Rooble.
"Dowladda Kenya ee deriska nahay waa dad aan deris nahay waa isku qasbanahay in aan ka shaqeyno wada-noolaasho, daris iyo na bad ku wada noolaano, waxaana cadeynayaa in shacabka Soomaaliyeed diyaar u yihiin in aan ka helno dadka aan deriska nahay ee Kenya.” Sidoo kale waxa uu sheegay in xuku umadd iisa ay dadaal badan ku bixineyso dha mmeys tirka doorashada, si looga faa’iideysto waqti ko oban ee haray."Habeen kasta waxaan ku duc eystaa in doorashada ay soo geba-gab owdo, iyada oo aysan cidna xag-xageyn, cidna waxba u dhimin, sidoo kale aysan jirin cid dhib aato loo geysto,” ayuu yiri R/wasaare Rooble oo ka hadlayey door ashooyinka.
Dowlgal Dad lagu soo qab-qabtay oo laga fuliyay gudaha M/Kismaayo
Ciidanka Hay’adda Nabadsugida iyo Sird oonka dowlad Goboleedka Jubbaland ee NISA ayaa howlgal ballaaran oo maalmo socday ka sameeyay gudaha Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ahna Caas imadda KMG ah ee Maamulkaas
Howlgalka Ciidamada Nabadsugida ay sam eeyeen xaafadaha kala duwan ee Kismaayo ayaa waxaa inta uu socday la gu soo qab-qabtay xubno loo ga shakiyay inay ka tirsan yih iin Al-shabaab, kuwaasi oo la amaha amniga ay Xa rumahoo da ku xireen.
Qoraal kasoo baxay Taliska NISA Jubbal and ayaa waxaa lagu sheegay in ujeedka ho wlgalka laga fuliyay Magaalada Kismaayo uu yahay mid lagu xaqiijinayo amniga Magaalada as, isla markaana lagu daba jiro xubno kale oo la tuhmayo, ayna socdaan howlgalo kale.
"Dhawaan waxaan bulshada la wadaagi doonaa warbixintooda oo dhameystiran iyo sha qooyinkii lidka ku ahaa amniga dadka iyo dalka ee ay ku howlanaayeen”ayaa lagu yiri Qoraal ka kasoo baxay Taliska NISA Jubbaland.
Taliska Hay’adda Nabadsugida Jubbaland ayaa shacabka kunool Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ugu baa qay inay la shaqeeyaan laamaha amniga, si lo oga hortego falalka amni darro ee mararka qa arkood halkaas ka dhaca.
Sida ay Somaliya &Kenya u kala heleen xirmooyinka shidaalka oo la ogaaday
Macluumaad ay idaacadda VOA ka heshay ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in kadib xadaynta ay Maxkamadda Caalamiga ah ee Garsoorka ICJ ka samaysay xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya ay inta badan xirmooyin ka la tuhunsan yahay inay ku jiraan shidaalka iyo khayraad kale ay marayaan dhinaca Soom aaliya ee xuduudda cusub.
Khabiir arrimaha badda ah oo darsay xuk unka maxkamadda oo codsaday inaan magic iisa la sheegin, arrimahan oo xasaasi ah darto od, ayaa VOA u sheegay in mid ka mid ah tod dobada xirmo ay martay dhinaca Kenya, afar-na dhinaca Soomaaliya, halka labada kale ay xuduuddu dhexmarayso oo ay labada dhinac ah u kala qaybsameen inkastoo dhulka ay ku fadhiyaan xirmooyinkaasi badankiisu marayo dhinaca Soomaaliya. Khabiirkaasi waxa uu u sheegay VOA in xir mada dhinaca Bari ugu xigta oo astaanteedu tahay L-26 ay martay dhinaca Kenya, halka qa ybo ka mid ah xirmo oyinka L-23 iyo L-24 ay sidoo kale mareen dhinaca Kenya.
Dawladda Kenya waxay sheegtay inaysan marnaba aqbalayn go’aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu sheegay oo kale in Kenya ay doonayso in qaab nabadeed iyo wadaxaaj ood lagu xalliyo arrinta iyadoo la marayo Mido wga Afrika
Puntland oo go’aan kasoo saartay 14 nin oo loo haystay inay yihiin AL-SHABAAB
Maxkamadda darajada 1aad ee ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa Shalay xorri yadooda u celisay 14 nin oo ku eedeysnaa in ay ka tirsan yihiin dagaalyahanada Al-Shaba ab, kuwaas oo muddo u xirnaa inay weeraro ka geysteen maamulkaasi.
Guddoomiyaha maxkamadda G/le Dhexe, Cabdiraxmaan Warsame Jaamac oo ku dhowaaqay go’aanka maxk amadda ee lagu sii daayey raggaasi ayaa sheegay in la gu waayey 14-kaasi nin dam biga lagu soo eedeeyey ee ah inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.
"Maxkamaddu waxa ay xorriyadooda siisay 14 kaas nin taliyaha xabsiga, taliyaha saldhigga cirka waxaa la la farayaa in ay xabsiga ka sii daayaan eedeysanayaashaasi afar iyo tobanka ah. Waa billaahi towfiiq,” ayuu yiri Gaashaanle Dhexe Cabdiraxmaan Warsame.
Ragga lasii daayey ayaa kala ah:-1- Cab diqaasim Maxamed Cabdulle, 2- Maxamed Car eys Faarax, 3- Najiib Xuseen Cali, 40- Maxa med Cusmaan Ibraahim, 5- Ismaaciil Axmed Maxamed, 6- Xuseen Maxamed Xuseen, 7- Aadan Bashiir Cabdi, 8- Jaamac Dayib Xaaji Maxamuud, 9- Deeq Jaamac Xasan, 10- Cis maan Cabdiraxmaan Shaafici., 11-Isaaq Xas an Aadan Shariif, 12- Cabdi Maxamed Isaaq, 13- Cabdulllaahi Muyxadiin Cabdullaahi iyo 14- Mustafe Ismaaciil Aadan.
Qaar ka mid ah raggaan oo la hadlay wari yeyaasha, kadib markii ay dib u heleen xorri yadooda ayaa shaaca ka qaaday inay aad ugu faraxsan yihiin go’aanka maxkamadda, waxa ana ay u mahadceliyeen dhammaan cid kasta oo ka qeyb qaadatay sii deyntooda.
Sidoo kale waxa ay tilmaameen in si wanaagsan loola dhaqmay muddadii ay xirn aayeen, gacantana ugu jireen ciidamada am maanka ee dowlad goboleedka Puntland.
Puntland ayaa horey xukuno kala duwan ugu ridday shaqsiyaad lagu helay inay ka tirsan yih iin kooxda Al-Shabaab, kuwaas oo lagu qabtay howl-gallo ka dhacay maamulkaasi.
Booliska Britain Oo Su’aalo Weydiinaya Aabbaha Dhalay Cali Xarbi Oo Loo Haysto Dilka Xildhibaan British Ah
Booliska Britain ayaa su’aalo weydiiyay aab baha ninka tuhunka laga qabo inuu dilay xil dhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Britain Xarbi Cali Kullane, oo 61 jir ah.
Xarbi Cali Kulane oo hore u soo noqday afh ayeenkii warbaahinta Ra’iisul Wasaaraha Soom aaliya, kaasoo degen magaalada London iyo Nairobi. Wuxuu xaqiijiyay in wiilkiisa uu ku jiro ga canta booliiska kadib tooreeydii wuxuuna she egay inuu ka argagaxay xariga wiilkiisa.
Xarbi Kulanne ayaa u sheegay The Sunday Times: ‘Aad ayaan u daree mayaa argagax. Ma aha wax aan fi layay ama weligay ku riyoon jiray”.
Wararka waxa ay sheegayaan in uu hadda u joogay Xarbi Kulane UK arrimo caafima ad awgiis xaalad wadnaha ah oo ku jiro Isbitaalka Bart.
Sidoo kale Booliiska Ingiriiska ayaa baaritaan ku sameeyay gurigii uu ku noolaa carruurnimadi isa ninka lagu tuhunsan yahay inuu dilay Xildhib aan David Amess. Saraakiisha ayaa baaray gur iga oo ku yaal waddo ku taal Croydon, koonfurta London.
Dhanka kale, waxaa socday baroor-diiq loo sameynayo xildhibaanka la dilay iyada oo shumacyo la dhigayo halkii uu weerarku ka dhac ay, si loo xusuusto noloshii Sir David.
Wuxuu Cali Xarbi ku xiran yahay imika Sal dhigga Boliska ee Essex, halkaasi oo ay Su’aalo ku waydiin doonaan waaxda booliiska ee ka hor tagga Argagixisada.
Cabdikaafi Maxamed Maxamuud oo kamid ah siyaasiyiinta Galmudug horeyna u soo noqday wa siirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Ga lmudug, ayaa ka hadlay xaalada maamulka Galm udug. Cabdikaafi ayaa sheegay in maamulka Galmudug uu ku jiro waqtigii ugu xumaa intii uu ji ray, isagoona weerar afka ah ku qaaday mad axweyne Qoor-Qoor oo uu ku sifeeyay "dagaal doonka iyo huriyaha colaada”.
"Ahlusunna ma doonayso dagaal, weerar ku ma ahan maamulka Galmudug, doorsahada na ma diidana, kaliya ASWJ waa Shabaab diid,” ayuu yiri Cabdikaafi Maxamuud
"Waxaa ugu baaqaynaa dadka Soomaaliye ed ee nabada jecel, Raysulwasaaraha Soomaaliya, saaxiibada Soomaaliya iyo hay’ adaha xaquuqul insaanka inay wax ka qabtaan kana hortagaan dhiiga Madaxw ayne Qoor Qoor daadinayo ee reer Galmudug.”
Sidoo kale waxa uu sheegay in hogaanka Ah lusunna ay u joogaan deegaanada Galmudug la dagaalanka Al-Shabaab, si ay uga xoreeyan shac abka Galmudug, sida uu hadalka u dhigay.
"Qoor Qoor waa dagaal doon, dhiig doon, isa gaana hurinayo colaada Guriceel. Qasadka AS WJ kaliya waa inay shacbiga Galmudug ka xor eeyaan Al Shaabaab,” ayuu hadalkiisa ku yiri Siyaasi Cabdikaafi. Ugu dambeyntiina wuxuu ugu baaqay sha cabka Guriceel inay u midoobaan difaacooda, ay na meesha ka saaraan kala aragti duwanaan shaha, isagoo sheegay in dhibaato kasta oo ka dhacda deegaankaas ay mas’uul ka noqon doonaan madaxweyne Qoor Qoor iyo Villa Somalia.
Cabdixakiin Cilmi Xasan Nairobi, Kenya
Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday
Warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa weerar culus oo Shalay dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shababa ku qaad een saldhig ciidamada am maanka Puntland ay ku le eyihiin deegaanka Af-urur ee gobolka Bari.
Weerarka oo ku billowday madaafiic ayaa waxaa xigay dagaal toos ah oo u dhexeeyey ciidamada Puntland iyo xoogagii weerarka soo qaaday, kaas oo saacado qaatay.,
Ilo deegaanka ah ayaa innoo sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaas culus oo ay is-we ydaarsanayeen labada dhinac, isla-markaana ay san cadeyn karin khasaaraha rasmiga.
Dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka Puntland oo ku aadan dagaalkaasi iyo weerarka ka horreeyey.
Al-Shabaab ayaa dhica kale guullo ka sheegatay weerarkan, waxaana ay shaacisay inay khasaare gaarsiiyeen ciidamada Puntland, ayna isaga bax een saldhigga la weeraray.
Xaaladda ayaa haatan deggan, waxaana ciid amada ammaanka Puntland ay howl-gallo ka bil aabeen nawaaxiga deegaanka Af-urur oo hoosta ga Boosaaso.
Inta badan dagaalyahanada Al-Shabaab oo ku xoogan dhulka buuraleyda ee gobolka Bari ayaa weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ku qaada saldhigyada ciidamada Puntland.
Maxkamadda ciidamaada oo xukuntay eed eysanayaal dhac u geysatay xarun ganacsi
Faarax Cabdullaahi Calasow "Faaraxey” iyo Maxamed Abshir Maxamed "Camey” ayaa markii ugu horraysay ka soo Muuqday Camerada Carwa Kaah Electronic oo ku taal degmada Ho dan gaar ahaan Taleex 29-kii June Sanadkan iyaga oo dhac u gays anayo Carwada.
Faarax iyo Maxam ed ayaa Carwada ka qaatay IPHONE,
SAMSUNG iyo agab kale oo electronic ah oo qiima ahaan ku kacayo $12,945 Dollar.Laba Alifle Boliis Faarax Cabdullaahi Calasow "Faaraxey” ayaa u gacan galay Ciidamada Dowladda labadii July oo isla xilligaasi lagu wareejiyay Hay’adda dambi baarista Boliiska CID.
Baaris dheer kadib ciidamada amniga ayaa ku soo wareejiyay billowgii August sanadkan Xaf iiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida oo xilligaasi ka codsaday garsoorka in loo gudbiyo xabsiga dhexe gar-suge ahaan.
Xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa isku howlay sidii ay u samayn lahaayeen ba aris kale oo ay ku xaqiijinayaan eedeymaha Bol iiska, waxa ayna billowgii Oktoobar bishan cods adeen in la muddeeyo dhageysiga dacwad ka dhan ah Faarax Cabdullaahi Calasow "Faaraxey” iyo Maxamed Abshir Maxamed "Camey” oo maq ana ah.
Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo kamid ah Xe er Ilaaliyaasha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa ku eedeeyay labada eedeysane ee mi di baxsadka yahay in ay magaallada dhac baah san ka gaysteen balse ay tahay Camerada kaah meesha kaliya ee laga helay cadayntooda, waxa uu sidoo kale soo bandhigay dambiya kale oo uu gaystay eedeysanaha Maxkamadda hor taagan sida dhaawac uu hore dhibane ugu gaystay. Max kamadda ayuu ka codsaday in lagu xukumo ciqaab u dhiganto qodobada ay ku soo eed eeyeen.Qareenka u dooday eedeysanaha ayaa Maxkamadda ka hor sheegay in ay diyaar u yihiin in ay kala xaalaan Carwa Kaah magta qaybtoo da, sidaas darteed ay Maxkamadda ka ogolaatay in laga qafiifiyo xukunka.
Dable Asluub Maxamed Abshir Maxamed "Camey” ayay Maxkamadda amar soo qabasho iyo hor keenis maxkamadeed ah u jartay hay’ada ha amniga 26-kii September sanadkan.
Garsoorayaasha Maxkamadda oo fursad u si iyay dhinacyada dacwadda kaalintooda Maxkama deeda ayaa ugu dambayn Shalay kuwada xuk umay Faarax Cabdullaahi Calasow "Faaraxey” iyo Maxamed Abshir Maxamed "Camey” oo ma qana ah min 10 sano oo xabsi ciidan ah iyo bixin ta qiimaha lacageed ee ku xusan Dambiga ay galeen sida dhinacyada dacwadda uu u sheegay Gaashaanle Maxamed Cabdi Muumin oo ka tir san Garsoorayaasha heerka Koowaad ee Maxka madda Ciidamada Qalabka Sida.
Taliska ciidanka Xoogga dalka oo soo ban dhigay Sarkaal ka tirsanaa Shabaab oo isku soo dhiibay
Taliska ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qeybta 60-aad ee ka howlgala dee gaanada maamulka K/Galbeed Soomaaliya ayaa soo bandhigay Sarkaal la sheegay inuu ka tirs anaa dagaalamayaasha Al-shabaab.
Sarkaal lasoo bandhigay ayaa isku soo dhi ibay ciidanka dowladda ayaa magaciisa lagu she egay Maxamed Kuuloow Cali oo ka mid ahaa saraakiisha Al-shabaab ee ka howlgali jiray gobolka Bakool oo ka mid ah gobolada maamulka Koofur Galbeed.
Saraakiil ka tirsan taliska qeybta 60-aad oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in sa rkaalkan isku soo dhiibay uu ku hubeysnaa qori noociisu yahay Ak47 iyo booshkiisa, islamarkaa na uu ka mid ahaa saraakiisha Shabaab ee ugu cadcad deegaanada gobolka Bakool.
Taliska Ciidanka Xoogga ee qeybta 60-aad ay aa dhowr jeer soo bandhigay saraakiil iyo xubno ay sheegeen inay kasoo goosteen Al-shabaab, iy adoo sidoo kalana mararka qaarna ay Al-shab aab dhankooda soo bandhigaan Askar ay ku she egaan inay kasoo goostaan Ciidanka dowladda iyo kuwa maamulada ay isku soo dhiibaan.
Majirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka dagaalamayaasha Al-shabaab oo la xariirta sark aalkan ay sheegeen taliska 60-aad inuu kasoo goostay Shabaab islamarkaana isku soo dhiibay
gacanta dowladda Soomaaliya.
Waxaa Magaaladda Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka lagu xiray, muwaadin Soo maali ah laguna soo oogay dacwad dil ula kac ah dib markii Gaari uu jiirsiiyay Nin kale oo Soo maali ah.
Cismaan Aweys oo 37 sanno jir ah ayaa Bool iska magaaladda Columbus ee gobolka Ohio dal ka Mareykanka sheegeen in Gaarigiisa oo si xo wli ah ku socda uu jiirsiiyay Ninka kale ee Sooma aliga ah sodaasina uu ku geeriyooday.
" Markii ay Ciidanka Booli isku ay gurmad deg-deg ah ku yim aadeen goobta qofka lagu jii ray waxay u yimaadeen nin dhaawac halis ah waxayna u qaad een Isbitaalka, wa xyar ka dibna waxaa la sheegay ninka 30-sanno jirka ah oo weli aanan magaciisa la shaacinin uu u dhint ay dhaawacii soo gaaray ay uu yiri” Mid kamid ah Soomalida ku nool maga aladda Columbus.
Saraakiil ka tirsan Booliska magaaladda Col umbus ayaa waxaa ay sheegeen inat wadaan baritaan kale oo dheeri ah, kaas oo ku saabsan sababta uu Ninkaan gariga u jiirsiiyay.
Magaalooyinka Mareykanka gaar ahaan kuwa ay Soomaalida ku badan yihiin ayaa waxaa mar arka qaar ka dhaca shilalka gaari iyo in Soo maalida dhexdeeda ay si dilaan.
Tahriibayayaal Soomaali ah oo laga soo ba dbaadiyay Xeebaha Greece
Hay’ad lagu magaaco Greek Helsinki Monitor ayaa baahisay in badbaadisay 26 Somali ah, ku waas oo kasoo tahriibay xeebaha Turkiga si ay u gu gudbaan qaar kamid ah dalalka Yurub. Dad kaas oo markii hore ka baxay meelo kamid ah Soomaaliya ayaa mud do ku sugnaa dalka Turki ga, hayeeshee u gu dambeyn gacanta lagu dhigay xilli ay doo nayeen inay u tahriibaan Yurub.
Ciidamo ka tirsan ilaalada Xeebaha dalka Ga reece ayaa dadkaasi geeyay kaam kuyaal dal kaas, kuwaas oo la sheegay inay ku heysato dhibaatoogin kala duwan.
Tahriibayayaasha Soomaalida ah oo isugu jira Rag iyo Dumar ayaa waxaa ay u badan yihiin Dhalinyaro, waxaana Xerada ay ku sugan yihiin ku ilaaliyaha Ciidamada ilaalada xeebaha dalka Greece.
Xeebaha u dhaxeeya dalalka Turkiga iyo Gr eece ayaa waxaa sanad walba lagu qabtaa So omaali dooneysa inay tahriib ku galaan Yurub, kuwaas oo badankood loo soo celiyay dalka Tur kiga.
Shirka Baarlamaanka Carabta oo lagu soo ga ba-gabeeyey magaalada Qaahira ee xarunta dal ka Masar ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday xa aladda Soomaaliya, gaar ahaan go’aankii ma xkamadda ICJ, arrimaha doorashooyinka iyo amniga.
Ugu horreyn xubnaha Baarlamaanka dalalka ku jira Jaamacadda Carabta ayaa si weyn u soo dhoweeyey go’aankii kasoo baxay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ oo Soomaaliya inta badan lo ogu xukumay dacwaddii badda ee kala dhex eysay dowladda dalka Kenya. Warsaxaafadeed ka soo baxay Baarlamaanka Carabta ayaa wax aa lagu sheegay inay u riyaaqeen guusha ay Soo maaliya ka gaartay dacwadda badda ee mudda da soo jiitameysay.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha Soomaaliya uga qeyb-galay shirkaa si ayaa faah faahin ka bixiyey qodobada kasoo baxay shirka, wuxuuna sheegay in Baarlamaanka dalalka ku jira Jaamacadda Carabta ay u hamba lyeeyeen Soomaaliya.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in muddada ay soo socotay dacwaddan ay hiil iyo codba la garab taagnaayeen dowladda federaalka ah ee Soo maaliya.
"Go’aankii ay soo saartay maxkamadda caal amig ah oo ay Soomaaliya ku guuleysatay dacwa ddii kala dhexeysay dowladda dariska aan nahay ee muranka gelisay badda Soomaaliya in muddo ahna soo jiitameysay, isaga oo baarlamaanka ca rabta mar weliba la barbar taagnaa hiil iyo hoo ama cod iyo taageerid ayaa waxa ay uga dhign eyd guusha ay gaartay dowladda Soomaaliya iyo shacabkeedaba ay baddeedii iyada ku soo cesh atay si sharci ah mid ay aad iyo aad runtii u guri yaaqeen, ayna soo dhoweeyeen go’aanka asi,” ayuu yiri xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Hadalkan ayaa ku soo aadayo, iyada oo Kha miistii maxkamadda ICJ ay shaacisay xukunka bi yaha Soomaaliya ee ay muranka gelisay Kenya, kaas oo doodiisa ay soo bilaabatay 2014-kii, waxaana ku guuleysatay Soomaaliya oo inta badan loo xukumay biyihii la’isku hayey.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Mac ron ayaa dambi aan la cafin karin ku tilmaamay hawlgal 60 sanadood ka hor ciidamada Far ansiiska ay ku laayeen dad reer Aljeeriya ah oo ku muddaharaadayay magaalada Paris.
Maadxweyne Macron ayaa noqonaya madaxwey nihii ugu horreeyay ee dalkaasi oo ka qeyb galo munaasaabd loogu murugoonayo dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay hawlgalkaasi boolis ka dalkaasi ee 17-kii Oktoobar san adkii 1961-dii.
Booliska ayaa xilligaasi waxa uu gacanya ula tagay dad reer Aljeeriya ah oo muddaharaada yay. Mr Macron ayaa u sheegay ehellada dhi banayaasha sannad -guurada 60 -aad ee ka soo wareegtay markii dhiiggu daatay in "dembiyo” ay galeen taliska booliska Paris Maurice Papon.
Macron ayaa cambaareeyay falka boliiska isagoo ku ku tilmaamay mid aan marmarsiinyo lahayn, hase yeeshee wuxuu ka gaabsaday inuu raal igelin bixiyo oo keliya.
Madaxweynaha Turkiga oo Shalay Booqa sho ku maraya dalal ka tirsan Afrika
Turkiga oo xoojinaya xiriirka uu lee yahay wa ddamada Afrika, ayaa Shalay oo Axad ah waxaa dalka Angola tegaya wafdi uu hog gaaminayo Madaxweyne Recep Ta yyip Erdogan. Waa booqashadiisa ugu horreysa ee uu ku tegayo Angola, waxaana ku xigi doona wadamada Naj eeriya iyo Toogo oo ka wada tirsan galbeedka Af rika.Turkiga ayaa horrey mashaariic waaweyn u ga hirgaliyay waddamada ay ka mid yihiin Soom aaliya, Ghana, Ruwanda.
Dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya ka hirgalisay saldhiga ciidan oo lagu tababaro ciidamada Soo maaliya, sidoo kale, Turkiga waxa ay Ruwanda ka hirgaliyeen fagaare weyn halka Ghana ay ka hirgaliyeen masjid weyn oo ay ku tukun karaan boqolaal kun oo qof.
Sidoo kale, dowladda Turkiga waxa ay dhi stay mashruuc ku kacaya 400km oo ah waddada baabuurta dhulka u dhexeeya dekedda Djibouti ilaa caasimadda Itoobiya ee Addis Abab.
Maalgalinta mashruucani ayaa sababay in dowladda Itoobiya oo aan lahayn bad ay hesho marin loo mariyo ganacsiga soo mara dekedda Jabuuti. xiriirka sii xoogeesanaya ee Turkiga uu la yeelanayo Afrika ayaa laga yaabaa inay miro badan dhaliso.
Safarka Shalay u billaabanaya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa wareeg kale oo dibl omaasiyadeed oo ku saabsan oo ku xoojinayo xiriirka dalkiisa uu la lee yahay waddamada ku yaalla galbeedka Afrika.
Wararkii ugu dambeeyey xaaladda caafim aad ee madaxweyne Clinton.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Cli nton oo habeenno dhowr ah ku hoyday isbitaal ku yaal Koofurta California, kadib markii uu ku dha cay cudurka kaadi -mareenka, ayaa la filayaa in Isniinta berri ah la soo sa aro, sida uu bayaan ku sheegay afh ayeenkiisa Sabtidii.75-jirkan, oo soo noqday madaxweyne intii u dhexeysay 1993 illaa 2001, ayaa la dhigay Xarunta Caafimaadka ee Ja amacadda California ee Irvine Medical Center fiidnimadii
Talaadada kadib markii uu dareemay daal la xiiraray jeermiskan. Wakaaladda wararka ee euters ayaa qortay in afhayeenka Clinton, Angel Urena, uu sheegay in xaaladda caafimaad ee ma daxweynihii hore ay wanaagsan tahay.
"Niyaddiisu aadbey u wanaagsan tahay, wu xuuna waqti la qaadanayay qoyskiisa, la kulamay saaxiibbadiisa, isla markaana uu daawaday kubbadda koleeyga,” ayuu Urena ku yiri bayaan uu soo dhigay Twitter -ka.
Xaaska Clinton, Xoghayihii hore ee Arrimaha Dibadda iyo murrashaxii madaxweynenimada ee xisbiga Dimuqraadiga ee 2016 Hillary Clinton, ayaa isbitaalka ku jirtay Sabtidii.
Clinton ayaa xanuunsay xilli uu California u joogay ka qeybgalka casho iyo taageero Maga a lada Los Angels loogu sameynayay hay’addiisa Clinton Foundation, waxaana madaxweynihii ho re uu muddooyinkii ugu dambeeyay la tacaalayay xanuunno kala duwan
Masjidka Barakeysan ee Makah Al-Mukara mah oo si buuxdo loo furay
Masjidka wayn ee barakaysan ee Makah Al-mukaramah ee wadanka Sucuudi Carabiya ayaa markii ugu horraysay si bux do loo furay tan iyo markii uu bilowday cud urka Covid-19, ka dib markii la khafiifiyay xa yiradihii lagu xakamayna yay cudurkaasi
Waxaa meesha laga saaray Astaamihii lagu dhajiyay dhul dhaca hoose ee masjidka ee dadka ku cibaadaysanaya ka caawin jiray inay kala fog aadaan, haatanna waxaa dadka loo ogol yahay in sidii caadiga aheyd ay garbaha isku qabta an Ha sayeeshee waxaa qasab ah in dhammaan dadka masjidka galaya ay tallaal buuxa qaateen ayna marnaba iska furin af xirka ama Facemaska
17 qof oo Mareykan ah oo lagu afduubtay dalka Haiti.
Ugu yaraan 17 wadaad oo Masiixiyiin Mare ykan ah iyo qoysaskooda oo ay ku jiraan ca rruur ayaa Sabtidii laga afduubtay caasimadda waddan ka Haiti ee Port-au-Pri nce, kaddib markii ay bu rcad hubeys an ay soo we erartay ga ari bas ah oo la socdeen, sida ay werisay jariid adda The New York Tim es.Afduubka ayaa dhacay markii dadkan oo halkaas u joogay faafinta diinta Masiixiga ay ka soo baxeen xarun agoon oo ku taal waddanka Haiti oo ay dhibaatadu ka jirto.
The New York Times oo soo xiganeysay mas uuliyiinta deegaanka iyo saraakiisha am niga ayaa intaas ku dartay in dadkan la qafa ashay iyaga oo saaran bas ku sii jeeday garo onka diyaaradaha oo ay ka duuli lahaayeen qeyb iyaga ka mid ah.
Jennifer Viau, oo ah afhayeenka Waaxda Arr imaha Dibadda Mareykanka ee magaalada Wa shington, ayaa farriin email ah ku sheegtay "inay la socdaan arrintan.”
Safaaradda Mareykanka ee Haiti kama aysan jawaabin codsi la xiriira warbixinta afduu bkan, iy ada oo afhayeen u hadlay booliiska Haiti ayaa sheegay inay raadinayaan macluu maad ku saab san afduubkan.
Warbixintu ma bixin faahfaahin ku saabsan da dkan faafinayay dhaqamada masiixiga iyo kani isadda ay ka tirsanyihiin. Rabshadaha bur cadda oo sii kordhay ayaa barakiciyay kuman aan qof, waxayna caqabad ku noqdeen dhaqa alihii wadd anka ugu saboolsan Ameerika, wa xaana rab shadahan biloowdeen kadib dilkii Madaxweyne Jovenel Moise ee bishii July iyo dhulgariirkii bishii August kaas oo ay ku dhint een in ka badan 2,000 oo qof.
Madaxa xisbiga Ciidamada Kirishtanka Lu bnaan (LF) ayaa Jimcihii beeniyey in kooxdiisa ay qorsheysay rabshado ka dhacay waddoo yinka magaalada caasimada ah ee Beirut oo ay ku dhinteen toddoba qof, wuxuuna sheegay in kulan ay yeesheen maalin kahor uu ahaa mid siyaas adeed oo kaliya.
Rabshadaha oo dhacay Khamiistii ayaa bi llaabmay markii shacabka ay ka qeyb-galeen ban aanbax ay ku baaqday kooxda Shiicada ah ee Xizbullah oo looga soo horjeedoay gar soore baa raya qaraxii dekedda Beirut ka dhacay sanadkii tegay.
Waxay ahaayeen rabshadihii ugu xumaa ee Lubnaan ka dhacay muddo tobanaan sano ah, waxayna dib usoo nooleeyeen xusuusta dag aal diimeedkii dalkaas ka dhacay 1975 illaa 1990.
Samir Geagea ayaa u sheegay raadiyaha Voice of Beirut International in kulan ay Arba cadii ye sheen kooxaha ku mideysan xisbiga LF uu ahaa mid ku saabsan waxa la sameyn karo haddii uu guuleysto isku dayga ay Xiz bullah ku tuureyso garsooraha.
Geagea ayaa sheegay in arrinta la isku raa cay ay aheyd in la sameeyo shaqo joojin dad weyne, islamarkaana aysan jirin wax kale.
Kooxda Xizbullah ayaa Jimcihii sare u qa aday eedeymaha ay u jeedineyso LF, waxayna sheeg tay in dhimashada toddobada qof ee Shi icada ah ay dalka ku jiideyso dagaal sokeeye.
Rabshadaha oo ka dillaacay xuduudda xaa fadaha Kirishtanka iyo Shiicada ayaa sii kordhi yey wallaaca laga qabo xasilloonida dalka Lu bn aan, oo ah dal ay shaca badan hub hayst aan, ka asi oo hadda wajahaya xaalad dhaq aale xumo.
Mar waxa laga weydiiyey haddii joogitaanka xub no ka mid ah kooxda LF ee xaafadaha Ain al-Remmaneh iyo Teyouneh ee markii toogash ada ay dhacaysay, ay la macno tahay in dhacd adan ay qorsheysneyd, Geagea ayaa ku jaw aabay in mar walba xaafdahaas joogaan xub no ayaga ka mid ah.
"Ciidamada waxay xireen dadka togash ada sameeyey, marka middaas ayaa kala cadd eyn doonta inay annaga naga tirsanaayeen iyo in kale,” ayuu yiri.
Qiyaastii 19 qof ayaa illaa hadda loo xiray dhacdadan.
Geagea, oo xisbigiisa uu xiriir dhow la leeya hay Sacuudi Carabiya, ayaa cambaareeyey mad axweyne Michel Aoun, oo ay taleefon ku wada-hadleen.
Aoun, oo xisbigiisa FPM uu yahay midka u gu weyn kirishtanka Lubnaan, ayaa xulufo la ah Xizbullah.
"Ma jecleysan taleefonkan, waayo Aoun wu xuu sameeyey eedeymo la mid ah kuwa Xiz bullah,” ayuu yiri Samir Geagea.
Kumanaan dad ah ayaa isugu soo baxey waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Khartoum.
Dibad baxayaasha ayaa doonaya in xukunka dalkaasi ay kula wareegaan ciidanka military-ga afgambi. Ciidanka iyo xubno rayid ah, ayaa wadaagayey awoodda dalkaasi iyo maamulk iisaba illaa iyo 2019-kii, markii xuk unka laga tuurey Madaxweynihii hore Omar al-Bashir. Dareenka dadka Sudan ayaa haatan kacsan, illaa iyo markii uu dhicisoobay afg ambigii ay ku dhaqaaqen qeyb kamid ah ciida nka bishii hore.
Dibad baxayaasha ayaa sheegaya in do w ladda haatan ay ku guul dareysatey wax u qab ashada dadkeeda, halka sicirka shidaalka uu ci rka isku shareerey, kabistiina la jarey.
Dibadbax kan hore lid ku ah, ayaa waxaa lagu wadaa inuu dhaco maalinta Khamiista ah, ee inagu soo fool leh.
Iraan iyo Shiinaha oo wada hadal ka yee shay Heshiiska Nuclearka
Wasiirka arrimaha Dibedda dalka Iran Hos sein Amirabdollahian ayaa wada hadal la yee shay dhiggiisa Shiinaha Wang Yi, iyagoona kulankooda uga hadlay heshiiska nukliyeerka Iran.
Wadahadal Wasiir Hossein Amirabdollahi an iyo Wang Yi ayaa wa xaa barbar socday xirir ka labada dhinac iyo horumarka gobolka iyo kuwa caalamiga ah, sida ay sheegtay wasaar adda arrimaha dibe dda ee dalka Iran.
Labada diblomaasi ee ugu sarreeya la bada dal waxay ku wada hadleen khadka tal eefanka, iyagoo ka wada hadlay xaaladdii ugu dambeysay ee Qorshaha Wadajirka ah ee Wa xqabad ee Wadajirka ah (JCPOA), ayay wasa araddu ku sheegtay bayaan. JCPOA waa mag aca rasmiga ah ee heshiiska nukliyeerka.
Dhinaca kale Wasaaradda ayaa Baya anka ay soo saartay ayaa lagu sheegay in la bada dhinac ay ka wada hadleen arrimo laba geesood ah, kuwa gobolka iyo kuwa caalamiga ah, oo ay ku jiraan "xiriirka Iran iyo Midowga Yurub, Afgaanistaan, iyo wada xaajoodyada ku saabsan qaadista cunaqabateynta ka dhanka ah Iran.”
Kumanaan qof ayaa ka qeyb galey furi ta anka bandhigga aflaamka uggu weyn ee Afr ica,kaasoo ka furmay magaalada Ouaga dou gou, ee caasimada dalka Burkina Faso.
Munaasabaddan sanadlaha ah, ayaa dib loo dhigey bishii February ee ina dhaaftey, sababo xiriira cudurka safmarka ee Covid19.
Bandhigga filim-ka iyo Television-ka Pan Africa, oo loo soo gaabiyo FESPACO, ayaa soo jiita dad fara badan oo xiiseeya.
Dadka ayaa ka kala socda adduunka oo idil, si ay uggu dabbaal dagaan aflaamta inta badan African-ka ah, oo ay sidoo kale soo saa reen dadka African-ka.
Ammaanka guud ahaan magaalada, ayaa si weyn loo adkeeyey.
Gobolada Waqooyiga iyo Bariga ee dalka Bur kina Faso, ayaa waxaa halkaasi ka dhacayey weeraro ay kusoo qaadayeen qolyo sheegtay iney Jihaad doon yihiin, iyagoo aan kala joogsi laheyn illaa iyo sanaddii 2015-kii.